Malunga nathi -Shanghai Yangkai Electronics Co, Ltd.
I-Shanghai Yangkai Electronics Co, Ltd.
Sinamandla emveliso kwaye sivelisa ngaphezu kwe-10,000 yeemodeli. Sinokubonelela ngoluhlu olupheleleyo lweemveliso zolawulo olukude, oqobo kude, ulawulo olukude kunye nolawulo lwe-OEM. Kwiinkcukacha, iimveliso zine-infrared remote control, i-blue-izinyo lokulawula kude, i-Wi-Fi yokulawula kude kunye nolawulo olukude lwesixhobo sokupholisa umoya.
Qho ngonyaka sithumela iiseti zemizobo yokulawula kude kwi-EU, eMntla Melika, eMzantsi Melika, e-Australia nase Mzantsi mpuma we-Asia.
I-R & D ezimeleyo kunye nezinto ezintsha eziqhubekayo zisenza ukuba siqhubeke. Kule minyaka idlulileyo siye isicelo amalungelo awodwa omenzi wechiza kuquka patent lokuyila, patent imodeli eluncedo kunye nenkangeleko patent.
Kuxhomekeke kulawulo olusemgangathweni olungqongqo, ubugcisa, ukuphuculwa kokusebenza, inkonzo ebalaseleyo, sijolise ekubeni ngomnye wabadlali abaphambili kushishino lolawulo olukude kunye nokwenza ixabiso eliphezulu kubo bonke abathengi bethu.